Indlu entle kakhulu entliziyweni yeSandy Bay - I-Airbnb
Indlu entle kakhulu entliziyweni yeSandy Bay
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMelissa
Khululeka ngesitayile kunye nefenitshala yexabiso eliphezulu kunye nengaphakathi elisanda kulungiswa kule ndlu yokulala mi-3 njengendawo yokuphosa ilitye ukusuka kwindawo yokuthenga eSandy Bay. Isitayile sobuchwephesha kwaye sikhutshwe kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale uphumle eHobart. I-cottage inamagumbi okulala ama-3 lilinye elinebhedi yokumkanikazi, indawo yangaphandle yokuphumla kunye nokupaka imoto ngaphandle kwesitalato.
I-cottage isanda kulungiswa ngokupheleleyo kwaye yenziwe ngobuhle kunye nentuthuzelo kunye nobunewunewu engqondweni yendwendwe. Ibekwe kwinqanaba elinye, uya kuba nokufikelela kuyo yonke ipropathi ngexesha lokuhlala kwakho.
Amagumbi okulala amathathu amahle anikwe ibhedi yokumkanikazi ngalinye kwaye ikhitshi / indawo yokutyela / indawo yokuhlala ivulekile isicwangciso esinokufikelela kwiyadi esemva enelanga elungiselelwe ukutyela ngaphandle.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze uziphekele kodwa zininzi iindawo zokutyela ngaphakathi kweemitha ukuba ukhetha ukutya ngaphandle.
I-cottage ikwanendawo yokupaka isithuthi esinye okanye mhlawumbi ezimbini ukuba zihlangene.
Ubekwe entliziyweni yeSandy Bay uya kufumana i-Woolworths, iindawo zokubhaka, iposi, iindawo zokutyela, iikhefi nokunye okuninzi emnyango wakho.
Umphambili woMlambo iDerwent yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba kwaye ungafikelela kwi-CBD okanye kwindawo yebhetri malunga ne-10-15 imizuzu ngeenyawo.
Ufikelelo olulula kakhulu nolulula kuyo yonke into enokunikezelwa nguHobart, unokuhamba ngeenyawo okanye uthathe isithuthi sikawonke-wonke/Uber ukuba ukhetha ukungaqhubi.
Inombolo yomthetho: PLN-21-672